Topnepalnews.com | काठमाडौंका १४१ मतदानस्थल संवेदनशील, कहाँ- कहाँ खतरा ?
काठमाडौंका १४१ मतदानस्थल संवेदनशील, कहाँ- कहाँ खतरा ?
Posted on: December 02, 2017 | views: 299
काठमाडौं । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको २१ मंसिरमा हुने दोस्रो चरणको निर्वाचन सुरक्षाका दृष्टिले काठमाडौंका १ सय ४१ मतदानस्थललाई निर्वाचन आयोग र सुरक्षा संयन्त्रले संवेदनशील सूचीमा राखेको छ । काठमाडौंका ३ सय २० मतदानस्थलमध्ये संवेदनशील मानिएका १ सय ४१ मतदानस्थलमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको निर्वाचन आयोग र काठमाडौं जिल्ला सुरक्षा समितिले जनाएका छन्, राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
काठमाडौंका ३ सय २० मतदानस्थलमा ७ सय ३१ मतदान केन्द्र छन् । जसमा १ सय ४१ मतदानस्थल संवेदनशील र १ सय ७९ मतदानस्थल सामान्य रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी सुरक्षा चुनौती गोकर्णेश्वर नगरपालिका, कागेश्वरी नगरपालिका र तारकेश्वर नगरपालिकामा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निष्कर्ष छ ।
कीर्तिपुर नगरपालिकामा २० मतदानस्थलमध्य १३ सामान्य र सात संवेदनशील छन् । दक्षिणकाली नगरपालिकामा १५ मतदानस्थल रहेकोमा ९ मतदानस्थल सामान्य र ६ मतदानस्थल संवेदनशील रहेका छन् ।
आयोगका अनुसार १३ मतदानस्थल रहेको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा २ मतदानस्थल सामान्य र ११ मतदानस्थल संवेदनशील छन् । यसैगरी, १४ मतदानस्थल रहेको शंखरापुर नगरपालिकामा आठ सामान्य र ६ वटा संवेदनशील छन् । गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा १७ मतदानस्थल रहेका छन् । जसमा १ सामान्य र १६ मतदानस्थल संवेदनशील छन् । यसैगरी, १९ मतदानस्थल रहेको बूढानीलकण्ठमा ११ मतदानस्थल सामान्य र ८ मतदानस्थल संवेदनशील रहेको काठमाडांै प्रशासनले जनाएको छ ।